Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "muzvinapembe", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "muzvinapembe", iro shamwari manzwiro?
Card nzira yokuwana 3500 Yen vakasununguka yokunyatsoongorora zvinorehwa
nyanzvi kufembera kuti "muzvinapembe" neizvi nzvimbo
"muzvinapembe" rinoreva kuti vatambe kana akararamazve zvakanga zvarasika. Parudo, uye nevanhu vedu uye vakamhanyira smack munzvimbo yangu yakanga kudanana kare, kuti ungasarudza kuti kubatanidza kuedza Yarinaoso, akadai vachava kuroorwazve kana vanhu vakarambana, kare uye kutarisana chisarudzo guru pamusoro wako zvichida vachishandisa kadhi kuti ane zvinhu kuti kumanikidzwa.
"muzvinapembe" iri anokumhan'arira manzwiro
"muzvinapembe" yakanaka nzvimbo zvinofanirwa kureva kana uri haazotaurwizve yakanaka chinzvimbo, kusvika kungava zvakanaka pane ruzivo nezvakaitika kare mamiriro ezvinhu zvinoreva kuti iwe uende. Uyo anoda hachisi, kuti mugova unoda itsva, zvingava zviratidzo akawana zvikuru zvakanaka shamwari kupfuura aimbova mukomana. Zvingaita
ushamwari naye mberi murudo, kana vanhu musingaendi zvakanaka anoda, kunewo zvingangoita rokuyananisa. Kana iwe kuzvinhu vasikana kuti kunetseka, kunyange kana hazvirevi kuti nguva dzose zvakanaka, sezvo zvichiita kuti mhinduro kuti musoro, iwe uchagona kusimuka pamwechete manzwiro uye anozorodza.
apo ??"muzvinapembe" rakabva uine nechinzvimbo, nokuti mamiriro ezvinhu akanaka chaizvo kuti iye pari iri, zvinokosha kuva nemafungiro akanaka kusvika kubva yavo kuti mukana kuuya kuzviita anozvikudza. Zvisinei, kuti kuyerera nyore kuti manzwiro uye tichiona chinangwa nechokwadi urege Ndaikudzungudzirai zvakajeka ruzivo chinangwa.
achachinja chinzvimbo mumwe webato manzwiro
"muzvinapembe" zvinopesana neizvi nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "muzvinapembe" ndiro basa saka kure nesimba handidi kureva Aura kuva pasina. Mumakore zvakaitika uye nendangariro dzave kurimwa vanhu vaviri, sezvisina ndiko kukura muna Wakarebanashi netsaona To Li akava inosuruvarisa ndangariro, akadai netsaona mwoyo hazvaikwanisa igadziriswe ari dumped chake waaida, kwete chiratidzo chakanaka kwazvo.
manzwiro ake, zvakanaka nekuti haisi kuedza Ayumiyoro kwamuri, zviri nani kuti varege kukurudzira yakawanda sezvingabvira manzwiro ake panguva ino akachenjera. Kana
ona nokuyerera guru, harungashandurwi nzvimbo "muzvinapembe 'hazvisi mumwe akasarudza kwandiri. Zvisinei, chaizvo nekuti panguva yakadaro, kana Re nokudhiraivha panguva chokwadi zvakadzikama kusvika zvakasimba shure panguva yakapfuura, ndinoda kutaura zvakakodzera kuchinja nhungamiro iye kana iye kuita. Kunyange kana kure kushandira mubayiro, uchakwanisa kudzidza chinhu nokuchinja nzira nemafungiro.